21 / 08 / 2018 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Ogast 21, 2018
Kaarka Ballanta Ballanqaadka wuxuu ka hortagaa dulsaar aan ku filnayn
Codsiga "Ballpoint Card", oo ay bilaabeen Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir ee gaadiidka dadweynaha, ayaa sidoo kale meesha laga saaray walaacyadii "isku-dheelitir la'aanta". Haddii ay dhacdo dheelitirka kaarka İzmirim Card uu hoos ugu dhaco xadka, nidaamka ayaa si otomaatig ah u socon doona [More ...]
Sirkeci-Kazlıçeşme Treenka Ganacsi Lacageedka waa la joojiyay
TCDD waxay joojisay qandaraaska dib u cusboonaysiinta qadka tareenka tareenka ee magaalada ku yaal ee u dhexeeya Sirkeci iyo Kazlıçeşme ka dib markii la iloobey Seminaarada Dayactirka ee lagu dari doono qandaraaska. Joojinta hindisada waxaa sidoo kale saameyn ku yeeshay la'aanta tartanka qandaraaska. 1955-2013 ee Istanbul [More ...]
Bandhiga Tareenka Erzincan-Trabzon waa sugid!
Shilalka Joogitaanka Heerka Sare ee Adana
Agaasinka guud ee TCDD, Adana oo ku taal shilalka heerka isgoysyada, adeegyada Küçükdili ee heerka isgoysyada iyada oo la raacayo borotokoolka ay bixisay dowladda hoose ee Adana Metropolitan, ayaa sheegtay in baaritaanka garsoorka iyo maamulka la bilaabay. Madaxa xafiiska [More ...]
Gokdere gudbinta ee Bursa
Duqa Magaalada Bursa Metropolitan Alinur Aktas, Dowlada Hoose ee Magaalada oo leh isgoysyada codsiyada isweydaarsiga smart, taraafikada ee isgoyska Gökdere, ayuu yiri. Dowladda Hoose ee Magaalada Bursa, waxay khibrad u leedahay gaadiidka magaalada [More ...]
Ciqaabta 259 Lira ee Tramways ee Kocaeli
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli waxay sameyneysaa kormeer ku aaddan sida ugu wanaagsan ee looga shaqeyn karo khadka tareenka. Daraasadda oo ay si wada jir ah u fuliyeen kooxaha amniga, gawaarida ku safra wadada tareenka ayaa la gartaa lana ciqaabayaa. Kooxaha amniga [More ...]
Baabuurkani wuxuu Neefsanyahay 42 Guryaha
Dowlada Hoose ee Magaalada Kocaeli ayaa badaleysa buundadii hore ee lugeyneysa ee D-100. Dowladda Hoose ee Magaalada waxay dhistay buundooyin badan oo lugeynaya oo cabirkoodu kaladuwan yahay isgoyska D-100 ee magaalada Izmit. [More ...]
3 Maalinta Xilliga Fasaxyadda ee Wadada Wadnaha ee 49 Dhimashada, 206 Injured
Iyada oo maalintii saddexaad ee sagaalkii maalmood ee fasaxa la soo afjaray, dadka 49 ayaa la diley halka dadka 206 ay ku dhaawacmeen shilalka ilaa hadda dhacay. Gobollada qaar xooggooda ayaa bilaabanaya dhamaadka dhamaadka [More ...]
Maanta taariikhda: 21 Agoosto 1941 Akpınar-Kurukavak
Maanta taariikhda 21 Agoosto 1941 Akpınar-Kurukavak (5. Km) ayaa la bilaabay.